असार १३ गतेबाट कीर्तिपुरः द लिजेन्ट अफ कीर्तिलक्ष्मी
काठमाडौँ । असार १३ गतेबाट चलचित्र कीर्तिपुरः द लिजेन्ट अफ कीर्तिलक्ष्मी देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । ऐतिहासिक विषयमा बनेको यस चलचित्र पाँच वर्षअघि नै निर्माण भएको भए पनि सेन्सर बोर्डले सेन्सर पास गर्न ढिलाइ गरेका कारण फिल्म समयमा प्रदर्शन हुन नसकेको निर्देशक प्रदीप खड्गीले बताए । विस्तृतमा
बलिउड अभिनेता सलमान खानको लोभलाग्दो लाइफस्टाइल
२०२० को इदको अवसरमा सलमानसँग अक्षय कुमार भिड्दै
राजामौलीको ‘मगधिरा’बाट चम्किएकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल
यस कारण तनाबमा छन् अभिनेत्री अनुपमा !
आफ्नै मिल्ने साथीले अमिताभको राजनीतिक करिअर ध्वस्त पारिदिएका थिए
अभिनेता अनुपम खेरको अजबगजबको प्रेम कथा
चर्चामा महिरा खानको इन्गेजमेन्ट, वास्तविकता के हो ?
अभिनेता शाहरुख खानको फिल्म ‘रइस’बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी पाकिस्तानी अभिनेत्री महिरा खान पुनः एक पटक चर्चामा आएकी छन् । कारण हो, उनको नयाँ सम्बन्ध । खबर अनुसार अभिनेत्री महिरा अहिले सलिम करिमसँग प्रेममा छन् । र, उनीहरुले हालै टर्कीमा इन्गेजमेन्टसमेत गरिसकेका छन् ।
कति छ बाहुबलीकी अभिनेत्री अनुष्का सेट्टीको सम्पत्ति !
बलिउड–पछिल्लो पटक टोलीउडमा निकै चर्चामा रहने अभिनेत्री हुन् अनुष्का सेट्टी । तेलुगु फिल्म ‘रुद्रमादेवी’ मा बोल्ड भुमिकामा देखिएकी अनुष्काको चर्चा तब चुलियो जब ‘बाहुबली’ फिल्ममा उनले अर्को बोल्ड अवतारमा देखिइन् ।
विराज भट्टको ‘साङ्लो’को कथा सुनेर रोएकी थिइन् पूर्वमिस नेपाल निकिता !
काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल निकिता चाण्डकले एक्शन अभिनेता विराज भट्टको फिल्म ‘साङ्लो’मा अभिनय गर्ने भएकी छन् । अभिनेता विराजले ‘साङ्लो’को स्क्रिप्ट सुनाउँदा आफू रोएकी बताएकी छन् ।
आनन्दको फिल्ममा आलिया ?
तनु वेड्स मनु, शुभ मंगल सावधान लगाएतका फिल्मका निर्माता आनन्द एल रायले नयाँ फिल्म बनाउँदैछन् । फिल्ममा अभिनेत्री आलिया भाटलाई लिन सकिने खबर बाहिर आएको छ ।
क्रिकेटर विराट कोहली र अभिनेत्री अनुष्का शर्मालाई पर्फेक्ट जोडी मानिन्छ । दुवै जना केही समय प्रेम सम्बन्धमा रहे । उनीहरुले सन् २०१७ मा विवाह गरे । तर, विराटको क्रस अनुष्का भने थिइनन् ।
प्रियंकासँग अझैं पनि रिसाइरहेका छन् सलमान ? यस्तो छ प्रतिक्रिया
एजेन्सी । अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री क्याट्रिना कैफको फिल्म ‘भारत’ ५ जुनबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । यो फिल्ममा मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा क्याट्रिना कैफ देखिदैछन् । सुरुमा क्याट्रिना कैफले निभाएकी भूमिकालाई अर्की अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले निभाउन वालामा थिइन्, तर ब्यक्तिगत समस्या देखाएर उनी फिल्मबाट बाहिरिइन् ।
सलमानको माया पाउन ऐश्वर्याले के मात्र गरिनन् !
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान र अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको प्रेमसम्बन्धको बारेमा थाहा नपाउने सायदै कोहि होला । त्यहि प्रेमसम्बन्धमा जेपनि गर्न पछि नहट्ने यी दुई अव एक अर्कालाई देख्न पनि चाहादैनन् ।
जब यी बलिउडका चर्चीत सेलिब्रिटीहरुलाई क्यान्सर रोग लाग्यो
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता सेलिब्रिटीहरु रहेका छन् जसलाई क्यान्सर जस्तो रोग लाग्यो ।
क्यान्सरको उपचार गराउन अमेरिका पुगेका ऋषि कपुरलाई कस्तो छ ?
एजेन्सी । पछिल्लो केही महिनादेखि अभिनेता ऋषि कपुर क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका थिए । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी क्यान्सरमुक्त भएका छन् ।
नागरिकता विवादमा परेपछि अक्षयले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् अक्षय कुमार । उनी एक देश प्रेमी नागरिक पनि हुन् । तर, उनीसँग भएको क्यानेडियन पासपोर्टका कारण उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् ।